Kungani amafayili e-Outlook PST athanda ukukhohlakala?
Ikhaya > Imikhiqizo > DataNumen Outlook Repair > Kungani amafayili e-Outlook PST athanda ukukhohlakala?
I-Outlook yi-most iklayenti le-imeyili elisetshenziswa kakhulu ku-Windows world. Kodwa-ke, amafayela wedatha e-Outlook PST nawo athambekele enkohlakalweni. Kungani? Ngezansi sizohlaziya izizathu nezisombululo ezihambisanayo.
1. IMicrosoft ayihlinzeki ngendlela ephumelelayo yokuvikela inkohlakalo yefayela le-PST
Owokuqala no-most Okubalulekile ukuthi iMicrosoft ayihlinzeki ngendlela esebenzayo yokuvikela inkohlakalo, ngale ndlela elandelayo:
Ifomethi yefayela le-PST uqobo ayinaso isici sokulwa nenkohlakalo, njengerekhodi lokuthola kabusha njenge-WinRAR .RAR ifomethi yengobo yomlando noma ikhasi lesifufula njengaku- SQL Server Imininingwane ye-MDD. Ngerekhodi lokuthola kabusha noma ikhasi lesifufula, lapho ingxenye yedatha ikhohlakele, kulula ukuyithola futhi unciphise amathuba okulahleka kwedatha ngama-90%.
Ifayela le-PST kulula ukonakala lapho usayizi wefayela ukhuphuka, futhi ayikho indlela yokuvimbela lokhu ngokuzenzakalela. I-Outlook ngeke isebenzise amafayela amaningi ukugcina idatha ngokuzenzakalela lapho usayizi wefayela mkhulu. Umsebenzisi udinga ukukwenza ngesandla. Futhi-ke, most wabasebenzisi ngeke bakubone lokhu. Okuwukuphela kwesici esihlobene ku-Outlook senza umsebenzisi afake kungobo yomlando ama-imeyili amadala, kepha lesi sici asinaki usayizi wefayela.
Ku-Outlook, asikho isici sokulondoloza ngokuzenzakalela sefayela le-PST. Uma i-Outlook inesici esinjalo, uma ifayili le-PST lonakele, noma lingatholakali, umuntu angalibuyisela kunguqulo yokuqala yokulondoloza, ezoqukatha most yedatha esesikhathini uma kwenziwa isipele njalo ngesonto.
IMicrosoft inikezela ngethuluzi lamahhala lokutakula ifayela le-PST elibizwa nge- i-scanpst, ehambisana ne-Outlook. Noma kunjalo, ingalungisa kuphela ifayela le-PST elinokonakala okuncane. Uma umonakalo noma inkohlakalo inkulu, khona-ke i-scanpst izokwehluleka ukuthola i-most yamacala.
Abantu abaningi basebenzisa kabi ifayili le-PST:
I-Outlook ithandwa kakhulu kangangokuba kunabantu abaningi abayisebenzisa nsuku zonke. Futhi abaningi basebenzisa kabi ifayili le-PST elenza lithambekele enkohlakalweni:
Kulezi zinsuku ngenxa yokwanda kwama-imeyili nenye idatha yomuntu siqu, usayizi wefayela le-PST ukwanda kakhulu. Kusuka kuma-GB amaningi ezinsukwini zokuqala, kuye ngaphezu kuka-20GB noma ngisho no-50GB. Okukhudlwana yifayela le-PST, lapho lizoba lula khona ukonakala. Umkhuba omuhle wokuphatha idatha enkulu ukuwahlukanisa abe ngamafayela amancane we-PST, ngokwesibonelo, gcina ama-imeyili amadala kumafayili we-PST agcinwe kungobo yomlando, ukuqinisekisa ukuthi usayizi wefayela ngalinye le-PST <= 10GB, esikhundleni sokusebenzisa ifayela elikhulu kakhulu le-PST.
Othile uzocisha ikhompyutha lapho ifayela le-PST lisavulwa yi-Outlook, nayo ezodala inkohlakalo.
Othile uzogcina amafayela amakhulu we-PST ku-network drive, okunganconyiwe ngoba ifayela le-PST ngokwalo alakhelwanga lokhu. Futhi kulula ukudala inkohlakalo lapho ufinyelela ifayela le-PST ngenethiwekhi.
Imininingwane eningiliziwe mayelana nemikhuba emihle yokuvikela inkohlakalo yefayela le-PST ingatholakala ku- https://www.datanumen.com/prevent-pst-corruption/
Ungawalungisa kanjani amafayela we-PST okonakele:
Uma kwenzeka inkohlakalo yefayela le-PST, okokuqala ungazama mahhala i-scanpst, ngoba iyithuluzi elisemthethweni elinikezwe iMicrosoft ukulungisa amafayela we-PST onakalisiwe, futhi kumahhala. Uma kungasebenzi, ungazama DataNumen Outlook Repair.